Akwụkwọ ikike maka mmepe nke Sọftụwia Na-emeghe na Meghee: Ezigbo omume | Site na Linux
una ikikere ngwanrọ, na -ekwu ya, enwere ike ịkọwa ya dịka nkwekọrịta n'etiti odee (onye okike) onye nwere ikikere iji ma kesaa ngwa ahia ekepụtara na onye nzụrụ ahịa ma ọ bụ onye ọrụ nke ya.
Ya mere, niile ikikere Site na nkọwa, ha gụnyere mmezu nke usoro usoro na ọnọdụ guzobere site na onye edemede (onye okike). Nke ahụ bụ, a ikikere ngwanrọ, abụghị ihe ọzọ karịa ikike iji nke mmemme n'okpuru ụfọdụ anabata anabata.
1 Ofdị ikikere ngwanrọ
1.1 Ngwa sọftụwia na - akwụ ụgwọ, nke anaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ na - emeghe software
1.2 Njirimara ngwanrọ na azụmaahịa
1.3 Typesdị ikikere sọftụwia ndị ọzọ
1.4 Nkọwa ndị ọzọ metụtara ya
2 Ihe ngwanrọ na Open Source Ikikere
2.1 Nbudata Software
2.2 Open isi
3 Ezigbo omume
3.1 a) Gụnye ikikere isi mmalite
3.2 b) Ginenye ikike maka akwukwo
Ofdị ikikere ngwanrọ
N'ọnọdụ ụfọdụ, ikikere ngwanrọ na-eme ka oge nke oge ị ga-enwe otu, ebe ha nwere ike ịbụ na-adịgide adịgide ma ọ bụ dị oke. Ihe ọzọ na - eme ka njirimara ha sie ike bụ oke ala, ya bụ, ókèala a ga-etinye ha na ya usoro na ọnọdụ guzobere; ebe ọ bụ na mba ọ bụla na-enwekarị iwu nke ha gbasara ikikere ngwanrọ.
Akwụkwọ ikike ha na-adịkarị iche na-adabere na ụdị Software a ga-ekpuchi, ya bụ, ụdị Ikike ọ bụla na / ma ọ bụ Software na-akọwapụta nke ọzọ. N'ime ikikere na / ma ọ bụ Sọftụwia anyị maara banyere ya:
Ngwa sọftụwia na - akwụ ụgwọ, nke anaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ na - emeghe software
Akwụkwọ ikike ịhapụ: Ọ na - enye onye ọrụ ohere iji sọftụwia ahụ na steeti ahapụrụ (nke nwebisiinka niile) ọha na eze ma gosipụta ya site n'aka onye edemede ya. Ikwado mmezu mmeghari na nkesa na ndi ozo.
Nlekọta Careware: Ọ na - enye onye ọrụ ikike otu ikike dịka ikike Freeware; ma na-akpọ ya ka o nye onyinye nke na-abụghị iwu ma ọ bụ nkwenye, na-akwado onyinye iji kwado ihe ndị metụtara mmadụ, ọrụ ebere na mgbasa ozi ndị ọzọ metụtara ya. Ohaneze na-ekwe ka onye ọrụ detuo ma gbanwee ya enweghị mmachi.
Crippleware License: Ọ na - enye onye ọrụ ohere iji sọftụwia ahụ rụọ ọrụ na nsụgharị ọkụ (Lite), ya bụ, nwere oke ọrụ ma e jiri ya tụnyere ụdị zuru ezu ma ọ bụ nke dị elu.
Akwụkwọ ikike inye onyinye: Ọ na - enye onye ọrụ ikike otu ikike dịka ikike Freeware; ma na-akpọ otu ihe ahụ iji nye onyinye na-enweghị iwu ma ọ bụ nkwenye, na-akwado ịga n'ihu mmepe nke ngwa a kwuru.
Freeware License: Ọ na - enye onye ọrụ ikike nnwere onwe iji ma detuo akụrụngwa n'okpuru usoro akọwapụtara onye mmemme nke mmemme a na - enyeghị ohere, n'ọnọdụ ọ bụla, mmezi ma ọ bụ ọrịre nke ndị ọzọ.
License Postcardware: Ọ na - enye onye ọrụ ikike otu ikike dịka ikike Freeware; ma na-akpọ otu ihe ahụ iji zipu akwụkwọ ozi nzipu ozi, n'ụzọ na-enweghị iwu ma ọ bụ nkwenye, na-akwado mmepe nke ngwaahịa a.
Ikike Shareware: Ọ na - enye onye ọrụ ohere iji sọftụwia ahụ rụọ ọrụ obere oge ma ọ bụ na - adịgide adịgide, mana yana ọrụ amachibidoro ya. Nke enwere ike rụọ ọrụ na ịkwụ ụgwọ maka ụdị zuru ezu.
Njirimara ngwanrọ na azụmaahịa
Un Njirimara ngwanrọ na-abụkarị na ndabara a Njirimara na ngwanrọ mechiri emechi, ebe ọ bụ na ikikere ya na-egbochi ya nnomi, mmeghari na redistribution ikike nke otu, belụsọ na onye ọrụ njedebe (onye zụrụ ahịa) kwụrụ onye ode akwụkwọ ego ole enwere ikike ime ya.
Mgbe a Ngwanrọ azụmahịa O nwere ikikere nke na-enye ndabara, ịkwụ ụgwọ otu ihe a ga-eji. Otú ọ dị, enwere Azụmahịa azụmaahịa nwere ike ịbụ n'efu ma ọ bụ nwe ụlọdika odi Sọftụwia na anaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụghị azụmaahịa.
Ọzọkwa, n'ụzọ ka ukwuu ma ọ bụ kpamkpam, ikikere ngwanrọ n'ọhịa nke Ngwanrọ nwere, mechiri emechi, ma ọ bụ nke azụmahịa Enwere ike inweta ha na atụmatụ dị iche iche, nke anyị nwere ike ikwu banyere ha:
Mpịakọta ikikere (Mpịakọta)
Zuru ezu Ngwaahịa ikikere (Mkpọsa)
Akwụkwọ ikike site na otu ngwaahịa (OEM)
Ọzọkwa, mgbe a Onye ọrụ ikpeazụ na-enwetakarị a Zuru ezu ikike a na-akpọkarị ya: Ọgwụgwụ Akwụkwọ ikike Onye Ọrụ (EULA) o Ọgwụgwụ Akwụkwọ ikike Onye Ọrụ (EULA). Na Bekee a na-akpọkarị ya Ọgwụgwụ Ikike Onye Ọrụ (EULA).
Typesdị ikikere sọftụwia ndị ọzọ
Site na ngalaba ọha: Nke ahụ anaghị etinye ihe dị na nwebiisinka ma na-enye ohere iji ya, Iyingomi, mmezi ma ọ bụ redistribution maka uru ma ọ bụ na ọ bụghị.
Nwepu aka: Nke ejiri ya na ngwaahịa sọftụwia efu, nke usoro nkesa ya anaghị anabata ndị nkesa ịgbakwunye mmachi ọ bụla ọzọ mgbe ha na-ekesa ma ọ bụ gbanwee ya, nke mere na ụdị a gbanwere ga-abụ n'efu.
Si ọkara free software: Nke ejiri ya na ngwaahịa ndị abụghị sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, mana na - enye ikikere iji ya, I copomi, nkesa na mgbanwe maka ndị na - enweghị uru
Nkọwa ndị ọzọ metụtara ya
Patenti: Ọ bụ ntọala ikike pụrụ iche nke gọọmentị ma ọ bụ ikike na-ekwe nkwa na onye mepụtara ngwaahịa ọhụrụ (nke a na-ahụ anya ma ọ bụ nke a na-adịghị ahụ anya) nke nwere ike iji ya rụọ ọrụ nke ọma maka ihe dị mma nke onye nyocha maka obere oge.
Nwebisiinka ma ọ bụ nwebisiinka: Protectiondị nchedo nke iwu dị n'ike n'ike n'ọtụtụ mba maka ndị edemede nke ọrụ izizi gụnyere edemede, egwu, egwu, nka na ọgụgụ isi, ma bipụtara ma bipụta akwụkwọ.
El Software ntanetị bụ sọftụwia na - asọpụrụ onye ọrụ na nnwere onwe obodo. N'uju, ọ pụtara na ndị ọrụ nwere nnwere onwe ịgba ọsọ, detuo, kesaa, ọmụmụ ihe, gbanwee ma melite ngwanro ahụ.
Na usoro nke Software Nwepu na karịsịa banyere Ikike ikikere (akwadoro / akwadoro) ikike kachasị elu na nke a bụ Ntọala ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ (FSF). Na nkebi ya raara nye Ikike ikikere na na ngalaba nke Ikike ikikere o Ndepụta nke ikikere (nke Software, Documentation na ọrụ ndị ọzọ, dakọtara ma ọ bụ na Akwụkwọ Ọha Ọha (GPL), na enweghị n'efu), nke Gtù GNU akpọrọ n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, ndị akọwapụtara n'okpuru:
GNU Izugbe Ọha: A na-akpọkarị GPL - GNU, a na-ejikwa ya maka ọtụtụ mmemme GNU na ihe karịrị ọkara nke ngwungwu Ngwá Ọrụ Free. Nke ikpeazu bu onodu nke 3, obu ezie na mbu nke mbu nke 2 ka eji ya.
GNU Nta Iwu Ọha Ọha: A na-akpọkarị LGPL - GNU, a na-ejikwa ya maka ụfọdụ (ọ bụghị ihe niile) ụlọ akwụkwọ GNU. Nke ikpeazu bu nke 3, obu ezie na mbu nke 2.1 nke ya ka odi.
Akwụkwọ ikike ọha na eze Affero: A na-akpọkarị AGPL - GNU, ọ dabere na GNU GPL, mana enwere nkebi ahịrịokwu ọzọ nke na-enye ndị ọrụ ohere ịmekọrịta ihe omume ikikere karịa netwọkụ iji nweta koodu isi maka mmemme ahụ. Nke kachasị ọhụrụ bụ nke 3.
Akwụkwọ ikike GNU Free Documentation: A na-akpọkarị FDL - GNU ma ọ bụ GFDL, ọ bụ ụdị Ikike nwebisiinka ezubere maka akwụkwọ ntuziaka, akwụkwọ ọgụgụ ma ọ bụ akwụkwọ ndị ọzọ. Ebumnuche ya bụ iji hụ na onye ọ bụla nwere nnomi na idetu ọrụ ahụ, na-agbanwe ma ọ bụ na-enweghị mgbanwe, azụmahịa ma ọ bụ nke na-abụghị nke azụmahịa. Ihe kachasị ọhụrụ bụ nọmba mbipute 1.3.
Akụrụngwa Mepee uzo na-ezo aka software onye koodu isi etinyela ọnọdụ free site n'akụkụ ụwa niile ma nye ya ikikere nke na-enyere ya aka ijigharị ya ma ọ bụ mmegharị ya na ọnọdụ dị iche iche. Ọ dị iche na Software Nwepu, ebe ọ bụ na nke ikpeazụ ahụ na-agbachitere nnwere onwe nke ndị ọrụ na obodo nke jikọtara ya, ebe ndị Meghee Isi mmalite na-ele uru bara uru anya karịa ụkpụrụ nke nnwere onwe nke Software Nwepu.
Na usoro nke Meghee Isi mmalite na karịsịa banyere Ikike ikikere (akwadoro / akwadoro) ikike kachasị elu na nke a bụ Isi mmalite Open Initiative (OSI). Na nkebi ya raara nye Ikike ikikere akpọrọ n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, ndị akọwapụtara n'okpuru:
BSD - Nkebiahiri 3
FreeBSD - Nkeji edemede 2
Ihe ngosi Mozilla 2.0
Ọganihu na nkesa na-emekarị
Cdị eklips 2.0
OSI nwekwara a Ndepụta ikikere OSI niile akwadoro. Ọtụtụ n'ime ndị a Mepee ikikere Isi Iyi na-ewu ewu, ọtụtụ-eji ma ọ bụ nwee obodo siri ike ma na-akwado ya Ntọala ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ (FSF).
Maka edemede anyị, anyị ewerela dịka ọmụmaatụ Omume oma tụụrụ ime ma gosipụta ya "Koodu maka mmepe Initiative" na Bank Inter-American Development Bank, na oke nke Ikike Ngwanrọ, nke aghaghi iwere ya mgbe ị na-emepe ngwaahịa sọftụwia (ngwaọrụ dijitalụ), ọkachasị n'efu ma mepee.
N'etiti ezigbo omume ha nyere, n'usoro nke Ikike Ngwanrọ bụ ndị a kpọtụrụ aha n'okpuru:
a) Gụnye ikikere isi mmalite
Na-ekwu maka nkwanye gị, ọ bụ:
"... MIT, nke na-enye ndị ọrụ ndị ọzọ nnwere onwe ma ọ bụrụhaala na ha na-ekwu na ọ bụ onye kere ihe mbụ; akwụkwọ ikike Apache 2.0, Yiri nnọọ ka MIT kamakwa inye awara awara awara patent ikike site n'aka ndị ntinye aka na ndị ọrụ; na GNU GPL ikikere, nke chọrọ onye ọ bụla na-ekesa koodu gị ma ọ bụ ọrụ nrụpụta ga-eme ya mgbe ị na-edebe isi iyi na usoro otu. Ndị na-atụ ụtụ isi na-enye onyinye kwụ ọtọ nke ikike ikikere".
b) Ginenye ikike maka akwukwo
"Anyị na-akwado iji ihe ikikere eji emepụta ihe maka ikikere nke akwụkwọ ngwaọrụ. Na CC0-1.0, CC-BY-4.0 na CC-BY-SA-4.0 dịka ọmụmaatụ ha bụ ikikere imeghe ejiri maka ihe na-abụghị sọftụwia, site na usoro data na vidiyo. Rụba nke ahụ ama CC-BY-4.0 na CC-BY-SA-4.0 ekwesighi iji ha software. Maka akụrụngwa nke IDB mepụtara n'oge a, anyị na-akwado iji ya : Creative Commons IGO 3.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivative (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND)".
N’ikpeazụ, ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgụ nke anyị 2 isiokwu ndị metụtara ya gara aga Na isiokwu anyị na-ahapụrụ gị njikọ ndị dị n'okpuru: "Ezigbo omume iji zụlite sọftụwia na-akwụghị ụgwọ ma mepee: Akwụkwọ" y "Nka na ụzụ: Ezigbo omume na mmepe nke Software Free".
Anyị na-atụ anya na esta "bara uru obere post" banyere «Buenas prácticas» n'ọhịa nke «Licencias» iji maka ya «Software libre y abierto» mepụtara, bụ nke nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke okike, gigantic na eto eto nke ngwa nke na maka «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Akwụkwọ ikike maka mmepe nke Software efu na emeghe: Ezigbo omume
ProtonVPN, nhọrọ kachasị mma iji VPN na Linux